Ganaaxii Shirkadaha Waa Loo Guuxee Yaan La Gaagixin! Dullucda Faallo ka baxay Idaacada Radio Hargeysa oo ay soo diyaarisay wakaaladda wararka Somaliland ee SOLNA | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Ganaaxii Shirkadaha Waa Loo Guuxee Yaan La Gaagixin! Dullucda Faallo ka baxay Idaacada Radio Hargeysa oo ay soo diyaarisay wakaaladda wararka Somaliland ee SOLNA
Published on May 9, 2018 by Khadar A Muse (Hargeisa Office) · No Comments
Hargaysa (SDWO): Xukuumadda Somaliland ayaa ganaax lacageed ku ridday shirkadda shidaalka soo dejisa ee Red-sea iyo shirkadda gacanta ku haysa shaybaadhka shidaalka Berbera, kadib markii Haamaha kaydka shidaalka ee Berbera lagu shubay shidaal aan nadiif ahayn oo khasaare soo gaadhsiiyay gaadiidlayda kala duwan ee dalka.
Go’aanka xukuumaddu ku dhawaaqday wuxuu yiddidiilo geliyey muwaadiniinta reer Somaliland, waana markii u horreysay ee xukuumaddu ay ganaax dul-dhigto shirkad ganacsi, waxaanay arrintani gogol xaadh u tahay siyaasadda xukuumadda ee ku wajahan in sharciga ka sareeyo madaxda, ganacsatada iyo muwaadiniinta caadig ahba.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga, wershadaha iyo dalxiiska Somaliland mudane Maxamed Xasan Sacad (Saajin), ayaa sheegay in baadhitaan ay sameeyeen ku ogaadeen cidda keentay shidaalka wasakhaysan iyo kuwa dayacay masuuliyaddii ka saarnayd in ay ka hubiyaan shirkadaha bad-qabka shidaalka ay haamaha kaydka Berbera ku shubayaan.
Laba shirkadood ee masuuliyad darrada sameeyey waxay dawladdu ku taqsiirtay midkiiba inay bixiso ganaax lacageed oo dhan $355,500, waxaana wadarta lacagta laga doonayo labadan kambani ay noqonaysaa $711,000. Taasi oo ay ku shubayaan qasnada dawladda.
Waa ganaax ka hooseeya khasaarihii ay dalka geliyeen shirkadahaasi waxase ay bilow u tahay in xukuumadda cusub ee uu hoggaamiye Madaxweynihii shanaad ee Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ay cagta saartay jidkii isla xisaabtanka si looga dhabeeyo danta guud ee bulshada Somaliland.
Cabdirashiid Ciise waa dhibane Baabuurkiisu u fadhiisan gaadhay shiidaalka wasakhaysan wuxuu go’aanka xukuumadda ku tilmaamay qaraar u hiilinaya dhibaneyaasha waxyeeladu soo gaadhay. Waxaanu ku dooday in ganaaxani balaayo xijaab u noqon doono mustaqbalka shacabka Somaliland ee dibadda looga soo waaridi jiray badeecadaha aan tayada lahayn cunto, dawo iyo shiidaalba.
Dhiirashada xukuumaddu la timid oo dadweynaha Somaliland u guuxeen waxay tumaati ku tahay shirkadaha dheef-raadisku naxariistii ka qaaday.
Sidaas si la mid ah waxa ganaaxani ifafaale u yahay in aanu ganacsiga xorta ah ee waddanka ka jira, macnaheedu noqonaynin in maalqabeenadu ay u muuqdaan inay ka sareeyaan xeerka iyo sharciga ummadda kaleba qabanaya.
Sidaas darteed, waxa danbi kale ah in shirkadaha lagu helay dambigan qaarkood ay ka soo yeedhaan hadallo ay kaga galgalanayaan ganaaxan lagu taqsiiray dhibtii ay ummadda iyo gaadiidlayda u geysteen.
Gabogabadii waa in hay’adaha dawladda ee ganaaxan soo saaray aanay ku joogsan labadan shirkadood, balse ay dabogalaan cid kasta oo badeecad liidata soo gelisa Somaliland, waana inay u diyaar garoobaan oo aanay u jixin-jixin culaysyada ka iman kara cid kasta oo ummadda u dhaawacaysa sir iyo caad labadaba.
Halkan Ka Dhegayso Faaladaasi:
Xigasho: Wakaaladda wararka Somaliland ee SOLNA